Ngabe iziqukathi zethini zihlinzekwa yi-G STAR ziphephile futhi azinabo ubuthi? -Izindaba-G STAR TRADING LIMITED
Ngabe iziqukathi zethini zihlinzekwa yi-G STAR ziphephile futhi azinobuthi?
Isikhathi: 2021-01-04 Hits: 35
Iziqukathi zethu zikathayela zenziwe nge-tinplate esezingeni eliphakeme, eyaziwa nangokuthi i-tin-plated iron, igama elijwayelekile le-sheet yensimbi ene-electro-tinned, ebhekisa kushidi wensimbi engaphansi kwekhabhoni noma umugqa wensimbi ohlanganiswe ngothayela omsulwa ezinhlangothini zombili. I-Tin ikakhulu ibamba iqhaza ekuvikeleni ukugqwala nokugqwala. Ihlanganisa amandla nokuqina kwensimbi nokumelana nokugqwala, ikhono le-solder nokubukeka okuhle kwethini entweni eyodwa. Inezici zokumelana nokugqwala, okungewona ubuthi, amandla aphezulu kanye ne-ductilit enhle.
Ibhokisi likathayela, noma ngabe likhulu kangakanani, konke kwenziwa ngezinqubo eziningi zokugxivizwa, kudingeka izinqubo eziyisishiyagalombili noma eziyisishiyagalolunye, kanti amanye amacala kathayela adinga nezinqubo ezingamashumi amabili noma amathathu.
Ngaphambi kokuba siqale ukwenza amakesi kathayela, kudingeka sigqoke futhi siphrinte imiklamo emihle kuma-tinplates, enza ibhokisi lebhokisi lingabambi iqhaza kuphela ekulondolozweni kokudla, kepha futhi nokubukeka kokuhlobisa.
Yonke inki esiyifake ku-tinplate idlulise ukuhlolwa kwe-US FDA nokuhlolwa kwe-SGS. Bangakwazi ukuxhumana ngqo nokudla ngaphandle kwe-non-toxic.
Ngemuva kokuthi kwakhiwe amabhokisi kathayela, sizopakisha wonke amabhokisi kathayela endaweni yethu yokupakisha engenaluthuli.
Uma unemibuzo eminingi ngamabhokisi we-tin can, sicela ushiye umyalezo ngezansi, sizokuphendula kungakapheli amahora angama-24.
Previous: Uqala kanjani ithini okwenza ibhizinisi?